Arsenal Oo Guul Ka Gaadhay Sheffield United, Bukayo Saka Iyo Nicolas Pepe Oo Furdaamiyay Xilli Gunners Ay Tubta Guusha Kusoo Laabteen - Gool24.Net
Arsenal Oo Guul Ka Gaadhay Sheffield United, Bukayo Saka Iyo Nicolas Pepe Oo Furdaamiyay Xilli Gunners Ay Tubta Guusha Kusoo Laabteen
Arsenal ayaa guul ka gaadhay kooxda aan wali hal dhibic ka helin horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ee Sheffield United, kulankan oo ay qaybtiisii hore ahayd mid la isku mari waayay ayay Gunners goolasha heleen qaybtii dambe.
Bukayo Saka ayaa akoonka goolasha ee ciyaartan furay kahor inta uusan Nicolas Pepe hoggaanka u dheerayn xiddigaha Mikel Arteta, Blades ayuu goolka madiga ah daqiiqadii 83-aad usoo celiyay weeraryahan McGoldrick.
Sheffield United: Ramsdle, Baldock, Egan, Basham, Robinson, Stevens, Osborn, Berge, Lundstram, Burke, McGoldrick
Keydka: Foderingham, Fleck, McBurnie, Sharp, Lowe, Norwood, Ampadu
Arsenal: Leno, Gabriel, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Elneny, Saka, Willian, Aubameyang, Nketiah
Keydka: Runarsson, Lacazette, Maitland-Niles, Holding, Pepe, Willock, Xhaka
Faah-Faahinta Xogta Kulanka
Kulanka ayaa ku bilaabmay qaab ay kubadda maamulkeeda lahayd kooxda martida loo yahay ee Arsenal balse laba dhinac ay u badnaayeen hanaan daafacasho oo ay adkayd sida fursad la xusi karo ay hore ugu sameeyaan.
Fursadii ugu horreysay ee goolka ku aaday ayaa timid daqiiqadii 29-aad ee kulanka. da’yarka weerarka ee Arsenal ee Eddie Nketiah ayaa madaxa la helay kubad sarre oo ka timid Tierney balse goolhaye Ramsdale ayaa si sahlan ku qabsaday.
Aubameyang ayaa qarka u fuulay inuu hoggaanka usoo gacan geliyo Arsenal daqiiqadii 37-aad ee kulanka, kubad uu qalday goolhaye Ramsdale ayuu Ceballos u dhiibay Auba oo meel fog goolka ka toogtay balse shabaq ilaaliyaha Sheffield ayaa kubad adag oo cidhifka sarre ee goolka ku aadanayd iska fogeeyay.
Markale Aubameyang ayaa halis ku abuuray Blades daqiiqadii 44-aad, dhaliyaha ree Gabon ayaa kubad uu ka helay Ceballos maqas (Laba lugoodlay) ku kacay balse Ramsdale ayaa si dhib la’aan ah kubadda ku xakameeyay.
Qaybta hore ee kulanka ayaa ku dhammaatay bar-bardhac goolal la’aan ah, Arsenal ayaa ahayd kooxa fursadaha abuuraysay balse ciyaarta ayaa ka fogayd mid xiiso leh.
GOOAL: Arsenal ayaa goolka furitaanka ee kulankan heshay daqiiqadii 61-aad ee ciyaarta, kubad ay si cajiib ah usoo dhiseen xiddigaha Gunners ayuu karoos sarre dhiibay Bellerin iyadoo uu Bukayo Saka meel dhaw goolka madaxa kaga hirdiyay kubadda sidaasna goolka ku dhex dhigay.
GOOAL: Arsenal oo kulanka markaliya dishay ayaa saddex daqiiqo kaddib goolka furitaanka midka labaad ka heshay Nicolas Pepe oo bedel ku yimid, Pepe ayaa geeska kala soo xarooday kubad uu ka helay Bellerin isaga oo darbad hoose oo ay adagtahay in la xakameeyo hoos mariyay goolhaye Ramsdale.
Sheffield oo ahayd mid aan halis badan lahayn kulankan ayuu weeraryahankeeda Oliver McBurnie daqiiqadii 78-aad ee ciyaarta isku day ku sameeyay shabaqa Arsenal isaga oo meel fog kubadda ka laagay balse darbadiisa ayuu si dhib la’aan ah Leno ku qabsaday.
GOOAL: Blades ayaa hal gool soo ceshaday, weeraryahan McGoldrick ayaa baas uu ka helay saaxiibkii Baldock meel ka baxsan xerada ganaaxa ka darbeeyay kubadda, Leno ayaa kubadda oo gees ku xidhnayd gaadhi waayay.